Maalinta: Maarso 23, 2017
Gawaarida Gawaarida Qaranka ee Cusub ayaa la Soo Bandhigay: Ahmet Arslan, Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badaha iyo Isgaarsiinta, maahan kaliya safarada qeybta tareenka, laakiin sidoo kale tareenada, gawaarida rakaabka, gawaarida xamuulka. [More ...]
Karşıyaka Dadka ayaa ka Jawaabay Mashruuca Gawaarida Cable Gorno Hill: Lapta-Karşıyaka'Gorno Hill' waxaa loo qorsheeyay in lagu sameeyo gobolka loo yaqaan 'Cable Car Project', gobolka waxaa la siin doonaa [More ...]
Wareejinta baska korantadu waxay ka bilaabmaysaa Istanbul: Agaasinka guud ee Istanbul ee Tramway iyo Howlgalada tunnel (IETT) ayaa tagaya iibsashada wadarta basaska korontada ee 200. Agaasinka Guud ee Hawlaha Korantada ee Korantada Istanbul [More ...]
Horumar cusub oo laxiriira Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare ee Samsun-Ankara: Horumar cusub oo laxiriira Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare ee Samsun-Ankara. Ku xigeenka AK Party Samsat Fuat Köktas ayaa warbixin ka bixisay mashruuca tareenka xawaaraha sare ee Samsun-Ankara. [More ...]
MOTAS waxay aqoonsadeysaa cilladaha ka soo baxa sahanka
MOTAS waxay ku gartaa cilladaha cilladaha sahaminta: MOTAS waxay tilmaamtaa dhibaatooyinka, dhibaatooyinka iyo waxyaabaha ay jecel yihiin gaadiidleyda dadweynaha ee sahaminta. Boqolkiiba 82 ee rakaabka ayaa sheegaya inay ku qanacsan yihiin nadaafadda gawaarida, halka 83 [More ...]
Tijaabada Imtixaanka Akçaray Tram Project ayaa la soo gabagabeeyey: wadista tijaabada mashruuca taraamka Akçaray, oo bilaabi doonta gadiidka tareenka ee degmada Kocaeli Magaalo Weyn, ayaa si guul leh lagu soo gabagabeeyey. Fadhiga kursiga kabtanka gaariga taraamka ee bartamaha aagga [More ...]
Nidaamka Isgaadhsiinta ee Ankara 117 Million Passenger Moved
Qaabka Nidaamka Tareenka ee Ankara oo xambaarsan Rakaabka 117 Million oo Rakaab ah: Maamulka Magaalada Ankara ee Caasimadda EGO wuxuu siiyaa gaadiidkii rakaabka 316 milyan oo rakaab ah oo magaalada lagu raaco sanadkii lasoo dhaafay. Gaadiidka magaalada ee caasimada [More ...]
Xubnaha YOLDER waxay ku kulmeen Kizilcahamam
Xubnaha YOLDER waxay ku kulmeen Kızılcahamam: Seminar Line Line Maintenance-3, oo ay soo qabanqaabisay waaxda dayactirka TCDD, ayaa isu keenay xubnihii YOLDER. Loogu tala galay dayactirka khadka iyo hagaajinta saraakiisha iyo saraakiisha kantaroolka wadooyinka iyo iridda [More ...]
Koçbay, oo laga aasaasay IZBAN's Tepeköy - Selçuk Line
Kocbay, IZBAN Tepekoy - Baadhitaannada Khadka Selcuk Waxaa la helay: Mashruuca IZBAN 3. 2 kaas oo wali ka socda dhismaha khadka Tepeköy-Selçuk. TCDD 3. Maamulaha gobolka Selim Koçbay, [More ...]
Iyada oo ay ugu wacan tahay qandaraaska Dhismaha Wadada Wadnaha ee Haliç-Unkapanı: 2016 / 210419 KİK, qandaraaska shaqada dhismaha ee Haliç - Dhismaha Wadada Wadnaha ee Isku-Dhafka ee Unkapan,, oo ay fuliso Waaxda Dawladda Hoose ee Magaaladda Istanbul ee Adeegyada Kaabayaasha. [More ...]
Gaariga fiilada ee Ttenektepe ayaa dhulka ka jaray cagaha dadka waayeelka ah: Dowlada hoose ee Antalya Metropolitan Municipal waxay martigelisay dadka deggan guriga daryeelka caafimaadka ee Tünektepe aragtideeda gaarka ah. Waayeellada meel fog ka fiirinaya Tünektepe sannado badan, waa markii ugu horreysay ee ay la kulmaan farxadda ku tegida shirweynaha gawaarida fiilada leh. Tunektepe in [More ...]
RayHaber 23.03.2017 Warbixinta Shirka
Khadadka Magaalada Karaköy Pier Dhismaha Elastomer Buffer ee la iibsanayo (TÜLOMSAŞ) Adeegga kirada baabuurta waxaa la qaadi doonaa Ankara Metro Plant - Qalabka iibsiga batteriga ee Wagon, Mashiinka, Howlaha Nadiifinta Elektaroonikada ayaa la sameyn doonaa [More ...]